NEV ကုမ္ပဏီ BYD သည် စျေး ကြီးသော ကုန်ကြမ်း များနှင့် ထောက်ပံ့ငွေ များ လျော့နည်း ခြင်းကြောင့် စျေးနှုန်း များ မြင့်တက် ခဲ့သည် - Pandaily
Jan 24, 2022, 13:17ညနေ 2022/01/24 14:01:31 Pandaily
Shenzhen အခြေစိုက် BYD သည် မကြာသေးမီက စျေးနှုန်း များ မြင့်တက် မှုနှင့် ပတ်သက်၍ သောကြာနေ့က ထုတ်ပြန် ခဲ့သည်၎င်း၏ မင်းဆက်, Ocean စီးရီး အသစ် စွမ်းအင် မော်တော်ယာဉ် (NEV) မော်ဒယ် များS ရဲ့ ဈေးနှုန်းက ယွမ် ၇၀၀၀ (ဒေါ်လာ ၁ ၁၀၅) မြင့်တက် သွားပါတယ်။
BYD ကဤ အပြောင်းအလဲ ကိုကုန်ကြမ်း ဈေးနှုန်း များ မြင့်တက် ခြင်း နှင့်စွမ်းအင် ယာဉ် အသစ် များအတွက် ထောက်ပံ့ငွေ များ ကျဆင်း ခြင်းတို့ကြောင့် ဟု စွပ်စွဲ ခဲ့သည်။ စျေးနှုန်း ညှိနှိုင်းမှု ညွှန်ကြား ချက်အရ စျေးနှုန်း အသစ်သည် ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက် တွင်စတင် သက်ရောက် မည်ဖြစ်ပြီး စာချုပ်ချုပ်ဆို ချိန်တွင် အပ်ငွေ ကိုပေး ဆောင်သော ဖောက်သည် များသည် ညှိနှိုင်း မှုကြောင့် ထိခိုက် လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
အစောပိုင်းက တရုတ် ခေတ် ရေစီးကြောင်း လျှပ်စစ် မော်တော်ယာဉ် အမှတ်တံဆိပ် များ သည်သူတို့၏ မော်ဒယ် များ၏ စျေးနှုန်း များကို မြင့်တက် စေခဲ့သည်။ ဇန်နဝါရီလ ၁၁ ရက်နေ့တွင် Xiaopeng Automobile မှ ကြေငြာ ခဲ့သည်နောက်ဆုံး ထောက်ပံ့ငွေ ပြီးနောက် အားလုံး မော်ဒယ် များ ၏နောက်ဆုံး စျေးနှုန်း များယွမ် ၄၀၀၀ မှ ၆၀၀၀ (၆ ၃၂ ဒေါ်လာ မှ ၉ ၄၇ ဒေါ်လာ) အထိမြင့်တက်ခဲ့သည်။ စျေးနှုန်း များ မြင့်တက် ခြင်းသည် မော်တော်ယာဉ် ပုံစံနှင့် ဒီဇိုင်း အပြောင်းအလဲ များမပါ ၀ င်ပါ။
GAC AION နှင့် Nita Motors ကဲ့သို့သော အခြား NEV ထုတ်လုပ် သူများက ၂၀ ၂၂ ခုနှစ်တွင် စျေးနှုန်း များ မြင့်တက် ကြောင်း ကြေငြာ ခဲ့ပြီး Leapmotor သည် ၂၀ ၂၂ T03 မော်ဒယ်များကို ၂၀၂၁ ဒီဇင်ဘာ ၂၈ ရက်တွင် ပိုမိုမြင့်မားသော လမ်းညွှန် မှုဖြင့် တိုက်ရိုက် စတင်ခဲ့သည်။
ဘဏ္ Finance ာရေး ၀ န်ကြီးဌာန၊ စက်မှုနှင့် သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာ ၀ န်ကြီးဌာန၊ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ ၀ န်ကြီးဌာန နှင့်အမျိုးသား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ရေးနှင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ကော်မရှင် တို့သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်တွင် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် NEV ထောက်ပံ့ငွေ စံ နှုန်းကို ၂၀၂၁ မှ ၃၀% လျှော့ချရန် အစီအစဉ် ကိုအဆိုပြု ခဲ့ကြသည်။ ၂၀ ၂၂ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက် နောက်ပိုင်းတွင် လိုင်စင် ရရှိ ခဲ့သော NEV သည် နိုင်ငံတော် မှ ထောက်ပံ့ မှုများ မရရှိ တော့ပါ။ မူဝါဒ အသစ် အရ ၂၀ ၂၂ သည်တရုတ် အစိုးရသည် NEV ကိုထောက်ပံ့ ရန် နောက်ဆုံး နှစ်ဖြစ်သည်။
ဤကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း။ China Passenger Car Association (CPCA) က NEV မှရရှိသော ထောက်ပံ့ငွေ များ ကျဆင်း ခြင်းကြောင့် အချို့သော မော်ဒယ် များသည် စျေးနှုန်း များ ကိုချိန်ညှိ နိုင်ပြီး စားသုံး သူများ သည်သူတို့၏ ၀ ယ်ယူ မှု ရည်ရွယ်ချက် ကိုပြောင်းလဲ နိုင်ပြီး NEV ၏ ၀ ယ်လိုအား မှာ အနည်းငယ် ထိခိုက် လိမ့်မည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ မည်သို့ပင်ဆို စေကာ, စွမ်းအင် မော်တော်ယာဉ် စျေးကွက် အသစ် တိုးတက် နေဆဲဖြစ်သည်။ အမှာစာ များစွာ ကိုမ ပေးပို့ ရသေး သဖြင့် NEV ရောင်းအား အများစုသည် ထောက်ပံ့ငွေ နည်းပါး ခြင်းကြောင့် ထိခိုက် လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:၂၀၂၁ ဒီဇင်ဘာလ တွင်တရုတ် ခရီးသည်တင် ကား စျေးကွက် အား သုံးသပ် ခြင်း
CPCA ၏နောက်ဆုံး အချက်အလက်များအရ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် စွမ်းအင် သုံး ခရီးသည်တင် ကား သစ် များ၏ လက်လီ ရောင်းချ မှုသည် ၄ ၇၅, ၀၀၀ သို့ရောက်ရှိခဲ့ပြီး တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် ၁၂၈. ၈% နှင့် ယခင် လ ထက် ၂၅. ၄% တိုးတက်ခဲ့သည်။ ဇန်နဝါရီ မှ ဒီဇင်ဘာ လအထိ NEV လက်လီ ရောင်းချ မှုသည် ၂. ၉ ၈၉ သန်း ရှိခဲ့ပြီး တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် ၁၆၉. ၁% တိုးတက်ခဲ့သည်။
တရုတ် လျှပ်စစ် ကား ကုမ္ပဏီ BYD ၏ မိနစ် ပိုင်း များသည် မကြာသေးမီက ပေါ်ထွက် လာခဲ့ပြီး မော်ဒယ် များစွာ ၏ စျေးနှုန်း များ မြင့်တက်လာ လိမ့်မည်ဟု ဖော်ပြသည်။
တရုတ် လျှပ်စစ် ကား ထုတ်လုပ်သူ Neo သည် ၂၀ ၂၂ ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ အတွက် ကား ဝယ်ယူမှု လျှော့စျေး အစီအစဉ်ကို မကြာသေးမီက ကြေငြာခဲ့သည်။ ES8, ES6, EC6 အသစ္ မ်ားကို ဇန္န၀ါရီ ၃၁ ရက္ မတုိင္မီ ၀ယ္ယူ သူမ်ားႏွင့္ BaaS ဘက္ထရီ အငွား ၀န္ေဆာင္ မႈကို ေရြးခ်ယ္ ၀ယ္ယူ သူမ်ားအေနျဖင့္ ေလွ်ာ့ ေစ်း ရရွိ ႏုိင္သည္။